🥇 ▷ iPad Pro, 16-inji MacBook Pro, Mac Pro iyo Apple TV +: waxa aan filan karno muhimadda ugu weyn ee Oktoobar ✅
iPad Pro, 16-inji MacBook Pro, Mac Pro iyo Apple TV +: waxa aan filan karno muhimadda ugu weyn ee Oktoobar
Saaxiibkeey Eduardo wuxuu horey noogu sheegay waxa aan filayno inuu Apple ku soo bandhigi doono fure muhiim ah horey ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay bishii Sebtember: IPhone iyo Apple Watch cusub, oo ay weheliso bilaabista Apple Arcadian. Laakiin waxaa jira warar badan oo sugaya in la soo bandhigo oo la bilaabo, marka ma tihid kuwa keliya ee gudaha jooga waxaan ka shakisan nahay inaan qaban doono hal dhacdo kale bisha Oktoobar.
Iyo maxaa lagu bilaabi karaa munaasabada Oktoobar? Hagaag, liistadu ma aha mid gaaban, marka aynu aragno si deggan hadda oo ajandaha rasmiga ah ee Sebtember uu hore miiska u saaran yahay.
Aalado cusub oo leh aaladda iPad Pro ee hore u socota
Qalabka, warkan waxaa gudoomiye u ah iPad-ka. Taasi waa waxa xanta ay sheegayaan ilaa haatan:
A cusub 10.2 inji iPad, taas oo noqonaysa nooca caadiga ah ee beddelaya nooca 9.7-inji. Cabbiridda aaladda waxay la mid noqon doontaa kuwa kuwaa oo ah 0.5 inji oo dheeri ah waxay yareyn doonaan meegaarada. Kaameeradaadu waxay noqon laheyd lens leal
Cusub iPad Pro, badiyaa leh kamarad muraayad ah ‘Triple lens’ cusub oo laga dhaxlay iPhone 11 iyo “A13X” processor kaas oo kor u qaadaya wax qabadkiisa. Xanta aad u dhow laakiin shaki la gelinayo ee ah in moodooyinkaan laga yaabo inaysan muuqan illaa iyo Maarso 2020.
Aaladda iPad Air iyo iPad mini waay iska badali doonaan.
Apple soo bandhigi lahaa a cusub oo ah 16-inch MacBook Pro, kaas oo beddeli lahaa nooca 15-inji ah oo noqonaya laptop-ka ugu qaalisan uguna awoodda badan Apple. Waxay qalabeyneysaa nooc nooc cusub oo keyboard ah oo ka durugi doona dhibaatooyinka ay soo saareysey habka loo yaqaan ‘balanbaalisku’ uu bixiyo, shaashaduna waxay yareyn doontaa meegaarkeeda si loo dhigo shaashadda weyn iyada oo xajineysa xajmiga.
Inta soo hartay oo ah noocyada “MacBook Pro”, “MacBook Air”, “iMac” iyo “mini mini” waxay heli karaan wax uun cusboonaysiin ah, laakiin waxay ahaan laheyd mid yar oo diiradda saaraya hagaajinta faahfaahintooda. Waxaa laga yaabaa inaanaan ku arag munaasabaddan, laakiin si lama filaan ah ayaa loogu dhawaaqay oo ay weheliso war-saxaafadeed.
Waxaan ka qeyb geli doonnaa bilawga ugu dambeeya ee horay loo shaaciyay cusub Mac Pro iyo XDR Pro Display.
Waxaan uga tagnaa kuwa ugu shakiga badan ee ugu dambeeya: waxaan arki karnaa imaatinka a TV Apple cusub.
Apple TV + ugu dambeyntii wuxuu gaari lahaa aaladdayada oo dhan
U leexashada adeegyada, waxaan u badannahay inaan aragno imaatinka Apple TV + adduunka oo dhan dalal tiro badan (oo ay ku jiraan Spain, iyo Mexico laga yaabee mar dambe). Iyo sidoo kale Apple Arcade, haddiiba aan la bilaabin inta lagu gudajiray furaha Sebtember. Waa maxay waxa intaa ka badan, laga yaabee in iOS 13.1 beta loo qorsheeyay inuu yimaado Oktoobar oo lagu daro ugu yaraan mid ka mid ah labadan adeeg.
Dhanka Apple TV + wararka xanta ah waxay ku kacayaan $ 9.99 / Yuuro bishii, iyadoo dadka wax falanqeeya ay aamminsan yihiin inay lahaan doonaan 21 milyan oo macaamiil ah dhamaadka 2021. Dabcan, waxay noqon doontaa sida kaliya ee loo arko taxanaha asalka ah iyo buugga filimada ee Apple.
Wadaag iPad Pro, 16-inji MacBook Pro, Mac Pro iyo Apple TV +: waxa aan filan karno qodobka suurtagalka ah ee Oktoobar